Daniyeli 1 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Ngonyaka wesithathu wobukumkani bukaYehoyakim+ ukumkani wakwaYuda, kweza uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabhiloni eYerusalem, wayingqinga.+ 2 Ekuhambeni kwexesha uYehova wanikela esandleni sakhe uYehoyakim ukumkani wakwaYuda+ nenxalenye yempahla+ yendlu kaTHIXO oyinyaniso, wayisa ezweni laseShinare+ endlwini yothixo wakhe; zona izitya wazisa endlwini yobuncwane bothixo wakhe.+ 3 Ngoko ukumkani wathi kuAshpenazi igosa lakhe eliyintloko lenkundla+ makazise abanye boonyana bakaSirayeli nabenzala yasebukhosini nabezidwangube,+ 4 abantwana ababengenasiphene+ konke konke, iinzwana ezilumkileyo+ nezikrelekrele, ezinolwazi+ nezikufaneleyo ukuma ebhotweni lokumkani;+ abafundise iincwadi nolwimi lwamaKhaledi. 5 Ngaphezu koko, ukumkani wayalela ukuba banikwe mihla le ekudleni okuluncuthu+ kokumkani nasewayinini yakhe, kwanokuba bondliwe iminyaka emithathu, baze ekupheleni kwayo baziswe phambi kokumkani. 6 Ke phakathi kwabo kwakukho abanye boonyana bakwaYuda, uDaniyeli,+ uHananiya, uMishayeli noAzariya.+ 7 Yaye igosa eliyintloko lenkundla labathiya amagama.+ UDaniyeli wabizwa ngokuba nguBheleteshatsare;+ uHananiya ngokuba nguShadraki; uMishayeli ngokuba nguMeshaki; uAzariya ngokuba nguAbhednego.+ 8 UDaniyeli wazimisela entliziyweni yakhe ukuba angazingcolisi+ ngokutya okuluncuthu kokumkani nangewayini yakhe. Wazingisa ecela kwigosa eliyintloko lenkundla ukuba angazingcolisi.+ 9 Ngoko uTHIXO oyinyaniso wenza ukuba igosa eliyintloko lenkundla libe nobubele bothando nenceba kuDaniyeli.+ 10 Lathi ke igosa eliyintloko lenkundla kuDaniyeli: “Ndiyayoyika inkosi yam ukumkani, ethe ngokwayo yayalela ngento emaniyitye nemaniyisele.+ Ndoba yintoni na ke xa inokububona ubuso benu bumatshekile, bungafani noboontanga benu; yini na ukuba niyizisele ityala elingaka intloko yam kukumkani?” 11 Kodwa uDaniyeli wathi kumlindi owayemiselwe ligosa eliyintloko lenkundla+ phezu koDaniyeli, uHananiya, uMishayeli noAzariya: 12 “Khawuncede ubavavanye abakhonzi bakho iintsuku ezilishumi, usityise imifuno+ kuphela, sisele namanzi; 13 uze uthelekise inkangeleko yethu naleyo yabantwana abatya ukutya okuluncuthu kokumkani, wandule ke wenze kubakhonzi bakho ngokokubona kwakho.” 14 Ekugqibeleni wabaphulaphula kulo mbandela waza wabavavanya iintsuku ezilishumi. 15 Ekupheleni kweentsuku ezilishumi babekhangeleka bebahle yaye bondlekile kunabo bonke abantwana ababesitya ukutya okuluncuthu kokumkani.+ 16 Ukususela ngoko umlindi wabanika imifuno endaweni yokutya kwabo okuluncuthu newayini yabo.+ 17 Aba bantwana bane ke, uTHIXO oyinyaniso wabanika ulwazi, nokuziqonda zonke iincwadi, nobulumko;+ yaye uDaniyeli yena wayeyiqonda yonke imibono namaphupha.+ 18 Kwathi ekupheleni kweentsuku ezo zazimiswe ngukumkani,+ igosa eliyintloko lenkundla labangenisa phambi kukaNebhukadenetsare. 19 Wathi akuthetha nabo ukumkani, wafumanisa ukuba akukho namnye kubo owayekumgangatho kaDaniyeli, uHananiya, uMishayeli noAzariya;+ baza bona baqhubeka besima phambi kokumkani.+ 20 Nangayo yonke imibandela yobulumko nokuqonda+ awababuza yona ukumkani, wafumanisa ukuba babebodlula izihlandlo ezilishumi bonke ababingeleli abaqhelisela imilingo+ nabanobugqi+ ababekuwo wonke ummandla wakhe wasebukhosini. 21 Yaye uDaniyeli waqhubeka kwade kwangunyaka wokuqala kaKoreshi ukumkani.+